ပိစိကလေးလေးတုန်းကပိုချစ်ဖို့ကောင်းတာလား အခုပိုချစ်ဖို့ကောင်းလာတာလား မသဲကွဲတော့ဘူး 💕 – Trend.com.mm
The Return of Superman အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံး Daehan ၊ Minguk ၊ Manse ဆိုတဲ့အမြွာညီအစ်ကိုသုံးယောက်ကို အရမ်းချစ်ကြတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပါပဲ။
A post shared by 1958 (@songilkook) on Aug 19, 2018 at 2:25pm PDT
ပိစိကလေးလေးကတည်းက တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်သလို ညီအစ်ကိုသုံးယောက် တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ကြင်နာကြတဲ့အပြုအမူလေးတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေကသူတို့ကို အချစ်ပိုခဲ့ကြတာပါ။မင်းသားSong Il Kook ဟာလည်း ပရိသတ်တွေသဘောကျနှစ်သက်တဲ့မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်လို့ ဒီအစီအစဉ်လေးကို ပရိသတ်တွေက အမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြ
맛있는 김치를 만듭니다! (사진 보내주신 선생님께 감사드립니다~^^) 끝!
A post shared by 1958 (@songilkook) on Nov 30, 2016 at 6:15pm PST
ဒါပေမဲ့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကစလို့ The Return of Superman အစီအစဉ်မှာ ကလေးသုံးယောက်မပါဝင်တော့ပါဘူး။ဒီတော့ပရိသတ်တွေက သူတို့လေးတွေ ဘယ်အရွယ်ရောက်နေပြီလဲလို့သိချင်နေကြကာ လွမ်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ဖေဖေ Song Il Kook က ပရိသတ်တွေရဲ့
ဆန္ဒကိုသိတဲ့အလျောက် မတ်လ တုန်းက သူတို့လေးတွေရဲ့အသက် ၆နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
흔한 휴게소 풍경 ㅎㅎㅎ
A post shared by 1958 (@songilkook) on Aug 15, 2018 at 1:47pm PDT
သိပ်မကြာခင်ရက်ပိုင်းကလည်း Song Il Kook က သူ့ရဲ့အင်စတာဂရမ်မှာ ကလေးသုံးယောက် ကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ထပ်ပြီးတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အရပ်လေးတွေလည်းရှည်လာကြတာတွေ့ရပေမဲ့ ရုပ်ကလေးတွေတော့ သိပ်မပြောင်းသလိုပါပဲ။ပရိသတ်တွေလည်းမြင်တွေ့ရအောင် ပုံလေးတွေ ပြန်ပြီးမျှဝေလိုက်တယ်နော် 💕ပုံတွေမှာလည်းကြည့်လိုက်ဦး ပိုစ့်တွေပေးထားကြတာ မော်ဒယ်လ်တွေကျနေရော 😍
레오나르도 다빈치가 잠든 곳에서… 대한민국만세야! 아빠 때문에 고생이 많다…
A post shared by 1958 (@songilkook) on Aug 19, 2018 at 4:02pm PDT
베를린장벽 앞에서 때마침 베를린에서 만난 지인이 선물(?)해준 태극기를 들고~ 대한민국만세! 우리도 진정한 광복! 남과 북이 하나 되기를 바라며~
A post shared by 1958 (@songilkook) on Aug 14, 2018 at 4:25pm PDT
미니언즈 삼둥! 오랜만에 포토샵 좀 만져봤어요~ㅎㅎㅎ
A post shared by 1958 (@songilkook) on Jul 5, 2018 at 4:07pm PDT
A post shared by 1958 (@songilkook) on Aug 12, 2018 at 2:53pm PDT
A post shared by 1958 (@songilkook) on May 6, 2018 at 4:37am PDT
The Return of Superman အစီအစဉျကိုကွညျ့ရှုကွတဲ့ပရိသတျတှအေားလုံး Daehan ၊ Minguk ၊ Manse ဆိုတဲ့အမွှာညီအဈကိုသုံးယောကျကို အရမျးခဈြကွတယျဆိုတာ ငွငျးလို့မရတဲ့အမှနျတရားတဈခုပါပဲ။
ပိစိကလေးလေးကတညျးက တီဗီဖနျသားပွငျပျေါမှာ ပါဝငျခဲ့တာဖွဈသလို ညီအဈကိုသုံးယောကျ တဈယောကျအပျေါတဈယောကျ ကွငျနာကွတဲ့အပွုအမူလေးတှကွေောငျ့လညျး ပရိသတျတှကေသူတို့ကို အခဈြပိုခဲ့ကွတာပါ။မငျးသားSong Il Kook ဟာလညျး ပရိသတျတှသေဘောကနြှဈသကျတဲ့မငျးသားတဈလကျဖွဈလို့ ဒီအစီအစဉျလေးကို ပရိသတျတှကေ အမွဲမပွတျစောငျ့ကွညျ့ခဲ့ကွ
ဒါပမေဲ့ စိတျမကောငျးစှာနဲ့ပဲ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှဈကစလို့ The Return of Superman အစီအစဉျမှာ ကလေးသုံးယောကျမပါဝငျတော့ပါဘူး။ဒီတော့ပရိသတျတှကေ သူတို့လေးတှေ ဘယျအရှယျရောကျနပွေီလဲလို့သိခငျြနကွေကာ လှမျးနခေဲ့ကွပါတယျ။ဖဖေေ Song Il Kook က ပရိသတျတှရေဲ့
ဆန်ဒကိုသိတဲ့အလြောကျ မတျလ တုနျးက သူတို့လေးတှရေဲ့အသကျ ၆နှဈပွညျ့မှေးနအေ့မှတျတရပုံရိပျလေးတှတေငျပေးခဲ့ပါတယျ။
သိပျမကွာခငျရကျပိုငျးကလညျး Song Il Kook က သူ့ရဲ့အငျစတာဂရမျမှာ ကလေးသုံးယောကျ ကွီးပွငျးလာတဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို ထပျပွီးတငျပေးခဲ့ပါတယျ။အရပျလေးတှလေညျးရှညျလာကွတာတှရေ့ပမေဲ့ ရုပျကလေးတှတေော့ သိပျမပွောငျးသလိုပါပဲ။ပရိသတျတှလေညျးမွငျတှရေ့အောငျ ပုံလေးတှေ ပွနျပွီးမြှဝလေိုကျတယျနျော 💕ပုံတှမှောလညျးကွညျ့လိုကျဦး ပိုဈ့တှပေေးထားကွတာ မျောဒယျလျတှကေနြရေော 😍
သီချင်းသစ်တွေနဲ့ ပရိတ်သတ်ရှေ့မှောက်ကို ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Park Bom